Welcome Farsoon Technologies 'Second Visit - Vday chirungiso Manufacturing Technology Co., Ltd.
nguva: 2018-12-06 Hits:
On December 6, 2018, Farsoon Technologies akashanyira VTECH zvakare, waiita zvikuru rukudzo!
Farsoon Technologies chinhu zvachose kugadzirisa nokutengesa maindasitiri giredhi epurasitiki Laser sintering uye simbi Laser utsotso nehurongwa, kupa boka nyika rokutengesa uye rutsigiro mabasa ose ayo midziyo uye zvinhu. Asati kushanya uku, Mr. Chen, Mr. Wang uye Mr. Guo okuti mativi ose anogona kuchinjana uye kurukura muna VTECH’ S fekitari. Zviri isingawanzowanikwi zano iro showcased zvizere chido kuti hurukuro uye pamwe.
The President Mr. wang, General Manager Mr. Xiong uye nevamwe, akamiririra VTECH, Rakatanga noushamwari navo uye akaita anofunga urongwa kuti kushanya. Pataikurukura, Vatungamiriri akasuma VTECH, zvinogadzirwa, basa uye vatengi’ nyaya vaenzi. Uye vashanyi vakanga zvakadzama ruzivo kuti kugadzirwa uye maitiro Nezvakakuyiwa. Uyezve, ivo vakaguta kwazvo VTECH’ S vakazvimiririra dzakabudirira uye nyika-kirasi michina, uyewo yepamusoro upfu zvigadzirwa, kunyanya sphericity akanaka uye flowability pamusoro Nezvakakuyiwa. Panguva imwe, isu VTECH anoratidza kuremekedza zvikuru professionalism pamusoro Farsoon Technologies!
With Exchange ichi uye hurukuro, mativi yakasvika nekubvirana pasi kurei uye akasimba kukura. danho ose akasiya ayo anodhinda——kushanda kuramba, kuti nguva yakareba zvikukutu pamwe Kudyidzana uye kuvaka remangwana yakajeka!
KUMASHUREThe First Application uye Promotion Centre Metal Zvinhu chirungiso Manufacturing muna Hunan Kuri pamutemo Chigaro
NEXTVatengi Akashanyirwa VTECH